एउटा बोकाको मूल्य ३ लाख! - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख १८, २०७५ समय: ८:४४:४८
गाउँघरमा एउटा बोकाको मूल्य कति पर्ला? नवलपरासीको एक ब्यवसायिक बाख्रापालन फर्ममा एउटा बोकाको मूल्य ३ लाख छ। नवलपरासीको हर्कपुरमा रहेको बगैंचा फर्म हाउसमा अष्ट्रेलियाबाट ल्याइएको अष्ट्रेलियन बोयर जातका बाख्रा छन्। फर्ममा सबै यूरोपमा काम गरेर फर्किएकाहरु खटेका छन् । उनीहरूले पालेको एउटै बोकाको मूल्य यति धेरै रहेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यका कान्छा छोरा वीरभद्र आचार्यलगायत १० जनाको लगानीमा सञ्चालित फर्ममा आबद्ध सबै यूरोपमा बसेर कमाएकाहरू छन्। कृषिमा कुनै अनुभव नभएकाहरु आबद्ध भएपनि बाख्रापालन ब्यबसायमा सफल भएका छन्। उनीहरुको बाख्रापालनको सञ्जाल फैलँदो रहेको छ।
रैथाने जातका खसीबोका एक वर्षसम्म पाल्दा ३० देखि ४० किलो तौलका मात्र हुन्छन्। खुवाइएको तुलनामा मासु कम हुन्छ। तनहुँको बन्दिपुरमा सरकारले ४० वर्षअघि खोलेको बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रमा त्यस्तै जातका बाख्रापालन गरिएपनि ब्यापकता पाउन सकेको छैन। यही परिबेशमा उनीहरुको फर्म हाउसमा हुर्काइएका खसीबोकाको माग भने बढी छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।